Sep (27) Demostration
posted by jawpakao at 7:05 PM
posted by jawpakao at 8:20 PM
Mawlamine Demoestration in (24-9-2007)
စၚ႔ုကႏးၠချာအျာူကဲ အဃ႔၎ႁ ေဳငချနုႍချာ႑႔ါံျ ဆချးၠချာအျာူကဲအႁ ူၾင့ျ။ငကအျ (၁၀၀၀) ဖုက အငအျ့ုငကစျုဴၠချ့နဘချမၶ စၚ႔ုကႏ့ုငကစျ့နဘချါံျ ညုကႏေူ.ႁဆ.ဆည. မစျေ.ါအ ဆကဲုငကစျ၎ဓ့နဘချအက႔ ဘံျေ.နာအဤ.ဆကအျ ေငကအျနမ.ချၶ စၚ႔ုကႏါဴႁချအမသ ဆချႊ?ယွၫႎအႁါံျ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျအႁ ုကႏိဓညျး.ျုကဲ ဆချးၠချာအျာူကဲအႁ ့ုငကစျ့နဘချမ ဖဘဴၠဆ႑အျုကဲနမ.ချၶ (ၺမ.တအႈ)
်စျုကႏ နစၳ့ုငကစျ့နဘချ ဆချအႁုကဲၵ နု.ညျလယးၠချျု႑.ညျအႁုကဲၵ နု.ညျု႑ယႀ.အႁုကဲ ိံျုဴၠချာႁချစနမချႊ?ယွၫႎူၾၠ့ျ၎ႁ ၫ႕ုကႏ နဘ.ျးၠချာညျအၾင ႊႁုျ၎ဓ့ူ.ညျနမ.ချ ၫ႕ုကႏ လယါ႑ႁူတျ ေနဳဓချ့ကဲါယ ုာႂအႈနဘ.ျးၠချာညျအၾင ည.႔ေႁချာဃၠႏ ့ကဲါယုဴၠချုကႏ ဋ.ညျစရငကချ ိႈဘ႑ႈႀႈ နမ.ချ …
ိႈဘ႑ႈႀႈ ဆၾ.ညျဆၾၠုျူတျည.႔ေႁချာဃၠႏ နုက.ႁစရငကချာအျာူကဲ
posted by jawpakao at 5:14 PM
နစၳ့ုငကစျ့နဘချစၚ႔ုကႏးၠချူၢၠချ အဃ႔၎ႁတ႑ႁ ၏ိ့အျာၿင့ျနဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျုကႏုငကဍျ ိံျုဴၠချမၶ ဘကဲရကစျႊ?ယွၫႎအႁါံျ ညုကႏရကစျဘ႑ႈိႈပငကတျ ေ.ဘကႏနုအျ ိၿ.႔၎ႁ လငၶ
posted by jawpakao at 4:42 PM
ပႛဲကုဪဍဳင္လၢဳင္ ေဇႝာ္ကုဪျဒဟတ္ ထ႟းဆႏၵ (၂၃/၉/၂၀၀၇)
စၚ႔ုကႏးၠချူၢၠချ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျ ႊ?ယွၫႎ (၂၃/၉/၂၀၀၇)
ဘကဲအႁ၎ႁတ႑ႁ အႁနုအျၫ႕ ိၿ.႔၎ႁ ာိံျမၶ
ဘကဲစၚ႔းၠချူၢၠချ ႊ?ယွၫႎ (၂၃/၉/၂၀၀၇) အဃ႔၎ႁ စၚ႔ုကႏႊ?ယွၫႎ ၏ိ့အျဆချ ။ငကအျ (၅၀၀၀)ူဃဲၵ ဆကဲဆႈူ ။ငကအျ ုဴာျၵ ၏ိ့အျာၿင့ျုကႏ ႋုျ စဓူကစျုဴၠချအက႔ ဖုျအငကညျေ. ဖနမချုဟ.ျ်႕ူကႏ ေငကအျမၶ စၚ႔ုကႏနစၳႊ?ယွၫႎ အဃ႔၎ႁ ဆကဲုကႏမာဧ.ချ ုနမ႔နူတျ ုနမ႔အငကညျေငကအျ ႊ?ယုဴၠချွၫႎေငကအျမၶ မာဧ.ချုနမ႔တ႑ႁ …
ောဟငၠဆ.ယမချ“ု.န်၊နမယ … ိငက၊ေနမယ …
နိၨနေ.ချွညျယ်က“ုလျၫံချ၊ ေ္ာျယွဲဳႁနညမဆ႕ာဟ.ယ ူ႑အျန၏ာ.ုျနမယ … ိငက၊ေနမယ
အႁာိံျမၶ ပတျဘကႏနုအျ ဘ႑ႈိႈပငကတျာၢယ ေ. ိၿ.႔၎ႁလငၶ
posted by jawpakao at 4:24 PM
ဆချႊ?ယွၫႎ စၚ႔ုကႏ ေတ (၂၂/၉/၂၀၀ရ)
posted by jawpakao at 4:23 PM
ဆချု႑.ျါဴႁချ ဘ႑႔ာ။ငက့ျူူႁါာဴငၠချ (၂၁/၇/၂၀၀၇)
ဆချ ာႃႁမ႑.အႁနူတျ အငအျု႑.ျုဴၠချါဴႁချ ဘကဲ၎ႁနမ.ချ (၂၁/၈/၂၀၀၇)
စၚ႔ေ`ု.း.ျနဖၿ.ျာႁချဘကဲ၎ႁါံျနူတျ ဆချအႁ အငအျႊ?ယုဴၠချွၫႎ ဘကဲ၎ႁနမ.ချၶ
posted by jawpakao at 9:44 AM
ဆချာငကုကုျအႁ အငအျႊ?ယွၫႎဘကဲ၎ႁုကဲနမ.ချ ဘကဲ၎ႁါံျ နုအျူတျ ိၿ.႔၎ႁ ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 7:25 PM
စၚ႔ေ“ု.႒စ႔ ဆချအႁ အငအျါဴႁချႊ?ယုဴၠချွၫႎ စဴညျနမ.ချ
ဆချအႁ ။ငကအျမ ႒စ႔ါ႕ႊုျုကဲနူတျ လႁချိံျအငအျႊ?ယွၫႎါံျ စၚ႔ုကႏေ“ု.႒စ႔ ့႑ႁနုအျုၚငၠချ ဆချအႁ ိံျအငအျႊ?ယူတျွၫႎဘကဲ၎ႁနမ.ချၶ (၂၁/၉/၂၀၀၇)
posted by jawpakao at 6:03 PM
နစၳႊ??ယွၫႎဆချ ူဤဉးၠချူၢၠချ (၂၀/၉/၂၀၀၇)
နစၳႊ??ယွၫႎဆချ ူဤဉးၠချူၢၠချ၎ႁတ႑ႁ နုႍချစအငကညျႊ?ယူတျ ၫ႕ ႀႋႁုျ http://myintzay.blogspot.com/ ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 6:28 PM
နစၳႊ?ယွၫႎဆချ ူဤဉးၠချူၢၠချ စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁ
စၚ႔ုကႏုဟ.ျ်႕ူကႏ ာၿင့ျုကႏ၏ိ့အျဘုျူုျ”ုသဆချအႁ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျဘကဲ၎ႁနမ.ချၶ
ဘကဲအႁ၎ႁတ႑ႁ အႁချန္ဟႁၫ႕ ႀႋႁုျ http://mmedwatch.blogspot.com/ ာိံျမၶ
ဘကဲဳဟႈိမ.ချ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ာမၫကုျုကႏ (၆၀) တဓ
ဘကဲဳဟႈိမ.ချ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ာမၫကုျုကႏ (၆၀) တဓ၎ႁတ႑ႁ ။ငကအျမူဖက႔ူဖာႁချုကဲနူတျ ေအငကချာညျ စၚ႔းၠချစဥကနအႁ ဳဟႈုဴၠချိမ.ချါႁချချဆႉ.ဆႉ.ါံျ ာိယႊႁၾုျႊ?ယ၎ဓုကႏ ာိံျမေသၶ အချါက၎ျအသ လယာေ.ုၚငၠစျစဴအမသ စၚ႔ုကႏ နရံျနဆံျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျ၏စ့ျူူက႔ စၚ႔အဃ႔စဴညျါအယာညျ ဘ႑႔ာနူ.ညျ …
posted by jawpakao at 7:00 PM
ဆချူဤဉးၠချူၢၠချအႁ ႊဿယုဴၠချွၫႎ ဘကဲ၎ႁနမ.ချ
ၫ႕ုကႏေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ ုၴညငာညျညချ ဆချဆြၡါာဴငၠချအက႔ ုကႏဘနိႁဓနုဴႁစနမချဆချႊ?ယွၫႎ
့ငကအျၫ႕့႑ႁါ႑ႁေနဳဓချအငကညျုဟ.ျူၢၠချအက႔ နူဃ.တျစူကချ ၫ႕ဖနမချအာျဖငကချုဟ.ျ
ဘကဲအႁတ႑ႁ အႁချန္ဟႁၫ႕ ႀႋႁုျ ာငကယဖုျ ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 4:10 PM
အငကချစႉသါံျ ာႁုျုဴယုဴၠချ ့ဘကချ့ဘကချ့စဓ့စဓမ
အဃ႔၎ႁ(နဆအျနအညျဘဓ ၁၈ ဆၿ.ႁ ၂၀၀၇)ာၢယ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျေပကအျအႁ စညျါ်ငကအျနု.ညျးၠချနု.ညျု႑.ညျ ဳာႈဆချ ု႑ယႀ.အႁအက႔ ဆဲုဴၠချေတကႏ ေကစျီကစျုဴၠချ ညုကႏနဆၿ.အျတျ့႑ႁာ႑႔ ညုကႏူ႑့ျဆဏာ.ညျးၠႏးငၠုျုဴၠချ ဆႈုဴၠချအငဆ႑တျလယးၠချု႑.ညျအႁ နစချုဴၠချ (၁၉)ဆၿ.ႁ€ပဟၶ
လယးၠချု႑.ညျအႁနူတျ နုဴတျဘဟၠႏအ့ချၵ ုနာဴ.ညျတဓအျဳၳုဴၠချါံျ ိကႏုကႏိကချိတျ့႑ႁာ.ညျနု႑ႁနု႑ႁ ူဃၠႏါံျ နုႍချအငအျုဴၠချါဴႁချ ႊ?ယုဴၠချွၫႎ ါႁချါႁချဆႉ.ဆႉ.ါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချမၶ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျေွုျုျ စနမချဆဏာ.ညျးၠႏးၠငုျုဴၠချ နဳအျေွုျုျါံျမ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျုကဲ ု႑ယႀ.အႁုကဲ ့႑ႁါႁချိ်ကႏိ်ယ ့႑ႁါႁချအငအျး.ညျ ့႑ႁါႁချႊ?ယွၫႎ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျါံျျုကဲနူတျ စနမချို.ါာဴငၠချၫ႕ုကႏဆချအႁ နုအျုဴၠချူဟငၠချ ႊႁႂုျုဴၠချာႁချရကစျမသနမ.ချၶ
စၚ႔ုကႏႊႁႂုျရကစျမသ၎ႁ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျ စနမချ ိယိကချးၠႏးၠငုျာႁချအႁ စနမချိယိကချုၾ.အျူိကႏူတျ ေနဳဓချေမ.အႁါံျ ိကချ့႑ႁာ.ညျ နစချုဴ.အျုဴၠချာၢယ စနမချုူငကုျုာကႏလယးၠချု႑.ညျ နစၳႊ?ယွၫႎလယးၠချု႑.ညျါံျ နးႁိံျနူ.႔နူ.႔နမ.ချၶ စၚ႔ုကႏူုျႊုျေူကႏေဆႈစၿ.ညျ းၠချည.ည.နူတျ ါ႑ႁန္ဟႁေူကႏေဆႈစၿ.ညျာ.ညျါံျ ညုကႏ၏ိ့အျ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျအႁ ညုကႏစနမချႊ?ယွၫႎလယးၠချု႑.ညျအႁန့ချါ႑ႁွကႏလ.အျနုအျ ါ႑ႁုဴၠချာႁချ နစၳေႁချဖၿယါံျ ါ႑ႁွကႏလ.အျနုအျ ါ႑ႁုဴၠချူတျ ဳညျူဃအျေငကအျမၶ
ာ႑႔ေဳငချီမျ ၫ႕ုကႏဆချ ါာဴငၠချနူတျ ့ကငအျၫ႕ုကႏ ။ကချအုျုဴၠချ ဆချႊ?ယွၫႎ စဳကုႉဉ အက႔ လယအႁေ.အျုဴၠချူတျာငုျါံျ ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျေပကအျအႁ ့႑ႁိကချါက၎ျ ေအငကချဆချအႁ ေ.အျူတျာငုျါံျ ဘုျုကႏ့႑ႁာ.ညျအက႔ ်ၫ႕အဃ႔၎ႁ(၁၈/၉/၂၀၀၇)ာၢယ စနမချႊ?ယွၫႎ ့ုငကစျ့နဘချ စအဤညငုကဖဇည (စအဤညငုကဖဇညုႁနွ.ချ၏ဳချယ)ါံျ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျ နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချာႁချမၶ ဘကဲူကႏ့ကဲ့ကဲမ ဆချအႁ ါႁချါႁချဆႉ.ဆႉ. နုဴ.ညျဘိံျေ.ါအာၢယ နစၳေႁချဖၿယါံျ စၳ့႑ႁဘဴယမၶ ့ငကအျၫ႕ိံျာႁချ နစၳဘအငကုျီမျး.ႁါံျမ နစၳေႁချဖၿယါံျ ၫႁ႑့႑ႁနဆဃ.႔မၶ စနမချနစၳဘအငကုျဆြၡ ဘ႑႔ား.ႁ်ၾအျ ိယေႁချဖၿယဘ႑႔်ၾအျနမ.ချၶ
အငကချစႉသမညျအႁၾါံျ စၚ႔ုကႏေဳငချ၎ႁ ာႁုျုဴယုဴၠချာႁချ ့ဘကချ့ဘကချ့စဓ့စဓ ေအငကချဆချအႁု႑.ျ လယးၠချု႑.ညျအႁဘုျု႑.ျေ.ူုျ”ုသါႁချချဆႉ.ဆႉ.ာၢယ …
ေဳငချဳငက့ျေဳဓ၏စ႔ူၾၠ့ျ၎ႁ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျစဥကနူတျ ဘငကချူကစျနုဴႁနစၳဘအငကုျာ႑႔ စႁချနအ.႔ုကႏဆချ ဆြၡအႁအက႔ ုကႏါ႑ႁ။ံျစူံျနုအျ နစၳေႁချဖၿယာ.ညျလငါံျ …
ေူကႏေဆႈေပကအျ းၠႏးငၠုျလယးၠချု႑.ညျေအငကချစၚ႔ဘကဲ၎ႁ ိယစၳအယနႊ.ႁဘ႑႔်ၾအျနမ.ချ…
posted by jawpakao at 11:46 AM
ဘကဲူဤဉုဟ.ျဆချူ.ညျ (ဆချူငကုျ) ါာဴငၠချ
စၚ႔ုကႏနိဆမယာညျ ူဤဉးၠချာအျာူကဲ ွကႏိယဘကဲူဤဉုဟ.ျဆချူ.ညျ(“ဆချူငကုျ)ါာဴငၠချုကဲ ုနစဓအျ စႉသဆသ န”အႁ“အ့ျအႁ နႊုျုကႏိယာချာ႑႔ ိယိငချိတျနႊုျအႁါံျ နုႍချွကႏိယအက႔ ်ာျနုဴ.ညျူတျ ရကစျဘႈ႑ိႈပငကတျ ာ႑႔နး.အျ စအငကညျူတျ ာိံျမၶ ိၿ.႔ရကစျစႉသဆသအႁ၎ႁါံျ နုချွကႏူတျ္ေငကအျမၶ ိကႏုကႏေဳငချ၎ႁနူတျ နဆံျ။ုျိၾႁချ၎ဲ္ငက့ျနမ.ချၶ
posted by jawpakao at 9:11 AM
စၚ႔ုကႏ စ႑ႈဉာအျာူကဲ “အယူငုျိ်ကႏိ်ယ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ
စၚ႔ုကႏအုႉဆငကူျးၠချာအျာူကဲ ၫ႕ုကႏါနု.ႁု႑ယႀ.အုႉဆငကူျန”အႁအႁ “အယုဴၠချ ဘုျဘဓညျုဴၠချူငုျအၿယ ိ်ကႏိ်ယေူကႏေဆႈစၿ.ညျမၶ စၚ႔ုကႏ ူငုျအၿယအႁါံျ ညုကႏါနု.ႁု႑ယႀ.နးႁအႁ စႁချနအ.႔ုကႏ ါနု.ႁဆချအႁအက႔ ူကစျႊ?ယွၫႎုကဲနမ.ချါံျ ့ကဲူတျမၶ ူငုျအၿယအႁါံျ ်ဘဓညျ“အယုဴၠချ စၚ႔ုကႏ်ၾအျအဃ႔ နဆအျနအညျဘဓ (၁၃) ါံျာိံျမၶ ူၾၠ့ျူငုျအၿယအႁတ႑ႁ ၏စယဖယာႁချ စၚ႔ႀ.ုကဲ စၚ႔ုကႏ စ႑ႈဉႀ. အုႉဆငကူျာအျာူကဲနမ.ချ ာငချနုအျမၶ
ညုကႏါနု.ႁဆြၡစႁချနု.ႁ (ဆႁြ.၊အစျနစဓချယ်က)ါံျနူတျ ေအငကချလယအႁေ.အျူတျ (၄)အချါံျ့႑ႁါ႑ႁာၢယ စၚ႔ုကႏ်ၾအျအဃ႔ (၁၈ၵ၉ၵ၂၀၀၇)၎ႁာၢယ နုဴ.ညျေ.နစၳ့ုငကစျ့နဘချဆချ စအဤညငုကဖည နမ.ချါံျူနူ.ချူတျအက႔အက႔မၶ ူငုျူနူ.ချ“အယါံျ တ႑ႁ ဘံျနုအျ စၚ႔၎ႁ လငၶ
ၫ႕ုကႏါနု.ႁဆချနဆ.အကဆညႀငု‘ၠါံျ နုႍချစအငအျုဴၠချူငုျူနူ.ချ“အယ နစၳ့ုငကစျ့နဘချ စအဤညငုကဖညါံျ ေအငကချူနူ.ချူတျါံျ နုဴ.ညျဘိံျေ.နမ.ချါံျ ႊစျူနူ.ချ“အယုဴၠချစဴညျမၶ စၚ႔ုကႏ ူငုျူနူ.ချ“အယါံျ ညုကႏဆချအႁ စၚ႔ုကႏ စနမချ့ုငကစျ့နဘချ၎ႁ လႁချါ႑ႁစဓူကစျ စႁချဘၽငၠစျလယဆႉေျုကဲ စၚ႔ုကႏအငကညျနဆႁဘံျုႁ စအဤ.ညငုကဖဇည ာၢယ လႁချါ႑ႁအငကညျ်ငကစျ ေငကအျါံျ စၚ႔ုကႏ ်ၾအျအဃ႔ နဆအျနအညျဘဓ (၁၅) ါံျ ႊစျဘအငကုျ္နေ.တျူတျစဴညျမၶ ၫ႕ုကႏါနု.ႁဆချဆၾအျါာဴငၠချနူတျ စနမချႊ?ယွၫႎ ့ုငကစျ့နဘချ၎ႁါံျ လႁချါ႑ႁိံျ လႁချါ႑ႁေႁချဖၿယါံျ နုဴ.ညျဘိံျေ.နမ.ချါံျ ၫ႕ုကႏ ဋ.ညျစရငကချည.ည.အႁ ူနူ.ချူတျမၶ ညုကႏ ဆချေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁါံျ စၚ႔ုကႏ နစၳ့ုငကစျ့နဘချ၎ႁ ၫ႕ုကႏဆချါာငဴၠချ လႁချ့႑ႁါ႑ႁစဓူကစျါံျ ုကႏူတျန်ၿ.ညျနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျမၶ ူငုျူနူ.ချ“အယနစချနစချါံျ ညုကႏႀ.ဆ.ဘၾ. ဘံျနုအျစၚ႔၎ႁ လငၶ
posted by jawpakao at 11:27 AM
ုဟ.ျာညျူဤဉးၠချဘနါဓ (့ႁဆ.တအႈ) ါာဴငၠချ
posted by jawpakao at 4:45 PM
နု.ညျါု႕စဥက ုကႏါ႑ႁနုဴ.ညျနုအျ ာကုျူငုျါု႕ဖုကာ.ညျေငကအျလင
စၚ႔ုကႏ နု.ညျါု႕စဥက လယာါ်.ညျနုဴ.ညျုဴၠချာႁချ ႀႋႁုျါံျ ါ႑ႁွကႏလ.အျုဴၠချာႁချမၶ ွါယ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျႀႋႁုျဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ ာကုျူငုျနု.ညျါု႕စဥကါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျ စၚ႔ုကႏ နေညျအ.နညအျါံျ နေ.ညျနု႑ႁနု႑ႁမၶ နု.ညျါု႕စဥက ်ငကစျာႁချစၚ႔ုကႏ းၠချာဃယါံျ ၫ႑ႁဘ႑႔ာါဴငၠချမၶ နူ.စျူတျစလ.ါအ.စျနဳအျါံျနူတျ ၫ႑ႁုဴၠချဘတျဆေတျမၶ ဳဟဉာႁချ နုဴ.ညျာႁချ ႀႋႁုျညုကႏႀ.အၿ့ျ့ျါံျနူတျ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချမၶ စၚ႔ုကႏဆၿ.ႁုဴ.နအႁ ့ငကအျၫ႕ုကႏ Unicode ာညျ ့႑ႁာ႑႔အက႔ ့႑ႁနုဴ.ညျ နုဴ.ညျ့႑ႁါ႑ႁိံျုဴ.နူတျ ူၾၠ့ျ Unicode ါံျ အညျိံျုဴၠချ ။ဓစငမ႔€မၶ ဘကဲလယဳႁချ font Unicode ူကႏါံျ ္ညျဳဟဉအငကညျါ႑ႁအငကညျာႁချေငကအျမၶ ွါယ ညုကႏ ့ငကအျဆ.ျူကႏအက႔ ့႑ႁါ႑ႁနုဴ.ညျညုကႏႀ.ဆ.ဖုကါံျ စၨ၏ဳ.့႑ႁိယုကဲမၶ
စၚ႔ုကႏေဳငချ၎ႁ စၚ႔ုကႏ ေနဳအျ၎ႁ ာကုျူငုျႀႋႁုျ့ကဲါံျ ပတျဖကုျနေညျအ.နညအျ ွုျူတျအက႔အက႔ ၫႁ႑ာၢယ နုဴ.ညျဘိံျနုအျ နူ.႔နူ.႔ဆ႑.ဆ႑.ာ.ညျမၶ နဳအျစလ.ါအ.စျနဳအျ၎ႁ ု႑အျစလ.ါံျနူတျ နးႁ႒စႁချဆဴ.႔အသအုျုဴၠချာႁချ ာ႑႔ည႔အ႔က ာ႑႔ည႔မၶ စၚ႔ုကႏဆၿ.ႁုဴ.ုဴ.နအႁါံျ လယာ႑႔ုကႏာ႑႔ ာ႑႔ါနု.ႁုကႏာ႑႔ါနု.ႁ ွုျနွ.ႁ စႁချဘ်ငကစျစႁုျ”ဆငၠ့ျ ညုကႏ mail မၶ စၚ႔ုကႏါု႕ာညျစဥကနူတျ ညုကႏည႔ု႔၎ႁ ဘ႑႔ာဆဴ႔ူယ မစျ်စျဆကချန်.႔ အညျိံျုဴၠချာႁချမၶ ိကႏုကႏေဳငချ၎ႁနူတျ စၚ႔ုကႏးၠချစဥကနအႁ ်…ာႁချ ေနဳအျ ဆကချန်.႔နုဴ.ညျုဴၠချာႁချေငကအျ္ငက့ျနမ.ချၶ
ွါယ စၚ႔ုကႏေဳငချ၎ႁ စၳၫ႕လယာၿႁၠာႁချ ေစၚ႔းၠချနအႁအက႔ လယလယေ႔ေ႔ါံျ ္ညျဘိံျ နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချာႁချ ာကုျူငုျဘကဲ၏စချည.ည.ဆ.ျါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချစၚ႔ုကႏါု႕့ူငကချမၶ လႁချါ႑ႁအညျိံျါံျနူတျ လယာ႑႔ုကႏာ႑႔ ဘငကချရကဲၵ ဘငကချုကႏုဆစျ ဘကဲူကႏါ႑ႁစနူတျ န်ၿ.ညျႊ?ယူတျ စႁုျ”ဆငၠ့ျေငကအျမၶ ာကုျူငုျႀႋႁုျါံျနူတျ အညျိံျုဴၠချာႁချ ါဴငၠချအငကညျုဴၠချာႁချ ရငက့ျူၾင့ျ့႑ႁာ.ညျမၶ
ာကုျူငုျႀႋႁုျူဃၠႏါံျ စအတျူတျုကႏ ူငုျန၏စချၵ ူဃၠႏါံျ စအတျူတျုကႏ စနမချ ဆၾအျတကအျဘဴ.႔ၵ ူဃၠႏါံျ စအတျူတျုကႏ စနမချ့ကဲ့ရငကချ့.ဆၵ ူဃၠႏါံျ စအတျူတျုကႏစနမချႊအျပကုျၵ ူဃၠႏါံျ စအတျူတျုကႏစနမချးၠချု႑.ညျ ဘကဲ၏စချည.ည.ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျါု႕လယအၿ့ျမၶ ဘကဲါံျုကဲမ ူဃႏၠါံျ ဖုကာ႑႔ီမျ နုဴ.ညျဘိံျနုအျၵ ူဃၠႏါံျစႁချနအ.႔စနု.ႁနုအျဆႉႁမ႔လယဆႉေျအက႔နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချၵ ူဃႏၠါံျ ူလ.အျအကစျါံျ စႁချနအ.႔အက႔ နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချာႁချ ဘကဲ=စချည.ည. ေငကအျမၶ ွါယ ဘကဲ၏စချစႁချနအ.႔အက႔ နုဴ.ညျာႁချအႁ၎ႁါံျနေ.ညျာႁချမၵ ညုကႏစ႕ါကႏဖုကာ႑႔ီမျန့ချါံျ နုဴ.ညျဘိံျူတျါဴငၠချ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချမၶ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ါဴႁချအမသၵ မညျအၾႁအႁါံျ ညုကႏ”ုငၠုျ်ငကအျဖုက ဘဴယဘဴယ။ယ။ယ စအတျာ.ညျ ့ကဲါယဳဟဉွညျာ.ညျေငကအျါံျမ ညုကႏစ႕ါကႏလယာ႑႔ီမျနုဴ.ညျဘိံျုဴၠချါံျ ါဴငၠချမၶ
ိယ့ကဲစၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ါံျနအံျ စၾငုျဖုကာငုျါ႑ႁစအငကညျူတျါဴငၠချအက႔ ါ႑ႁစအတျါဴႁချူကႏါံျ ရက႔့႑ႁိယမၶ ူငုျဖုက ဳဟစျအငအျ ဳဟဉအငအျါံျ ုစံျဳဟဉအက႔ ုစံျစအငကညျာႁချါံျမ ဘကဲ၏စချ ႀႋႁုျေ႔ါံျ ႊက႔ၫံသ ႒စႁုျ့မႁုျာႁချမၶ ါ႑ႁစနဆ.ချစအငအျဘကဲူကႏါံျနူတျ နြါဴငၠုျါဴ.႔ာႁချါံျမ နဆချ့႑ႁိယၵ စနူတျအက႔ စနဆ.ချအက႔ န္ုျာကုျူငုျဖုကစကႏအက႔ႊက႔ေ.ုၚချါံျမ ်႑ႁူတျေအငကချ၎ႁအက႔ စအငကညျူတျ ဘကဲႊက႔ႊက႔ ႒စႁုျုျ့မႁုျ့မႁုျ ဘကဲ၎ႁမၶ
ဘကဲူကႏ့ကဲ့ကဲမ စၚ႔ုကႏေ“ု.ါု႕လယအၿ့ျါာဴငၠချ ာကုျူငုျါု႕ဖုကနူတျ အညျိံျုဴၠချမၵ ္ညျဘိံျနူတျါ႑ႁာႁချမၶ ာငုျါ႑ႁ့ကဲာ႑႔ါံျ ိယ့ကဲုဴယုဴယနအံျ ညုကႏေ႔နူတျ ဳႁချုကႏူငုျဘၾ.မါဴငၠချၶ ာက့ငကအျနမ.ာၢယ ဖုကါံျအငအျုဴၠချၫ႕ႀ.နးႁာ႑႔ုကဲါံျမ ူငုျနးႁမါ႑ႁါဴငၠချါံျ ဆုျ့ကဲ့႑ႁာ႑႔မၶ နုႍချ်ငကစျုဴၠချာဃယ၎ႁ ညုကႏူငုျဘၾ.ါံျ လယလယေ႔ေ႔နုဴ.ညျဘိံျ လယလယေ႔ေ႔ ဳဟဉွ.႔ာႁချ ဘတျဆေတျ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျေငကအျမၶ ါ႑ႁွကႏနုအျညုကႏူငုျါု႕စဥကါံျဘ႑႔ာနေ.ညျမၶ ့ငကအျါံျမ ညုကႏႀ.ဆ.ဘၾ.ါံျ ။ငကအျမစႁချနအ.႔စႁုျူတျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔၎ႁုကဲနူတျ ါ႑ႁေဳငချာံဳဟဉစဤငၠညျေ.နမ.ချၶ အချညချန့ချမ ုစံျစအငကညျ ူတျစၚ႔ုကႏာကုျူငုျါံျန့ချနမ.ချၶ
လယေ.အျူတျေရကဲေဘချူငုျဘၾ.စဤငအျူတျအက႔အက႔ါံျ ဆ႑ုျါ႑ႁစအငကညျ်႑ႁစၚ႔ုကႏာကုျူငုျ နုဴ.ညျုကႏူတျနအံျ ဆ႑ုျနု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချစဥကအႁ နးႁဳငက့ျနမ.ချ ါယူတျါံျမ စႁုျူတျုကႏ ာကုျူငုျညႀ.ဆ.ဘၾ. ာိံျမၶ ညုကႏေ႔နအံျ ုကႏူတျ၏ိ့အျ ဳဟဉစအငကညျာႁချုကႏညုကႏူငုျါု႕ေ႔န့ချမၵ နု.ညျါု႕စဥကနူတျ ုကႏါ႑ႁနုဴ.ညျနုအျာကုျူငုျါု႕ဖုက စၚ႔ုကႏေနဳအျနုဴ.ညျႀႋႁုျ၎ႁ ာကုျူငုျနု.ညျါု႕စဥကနူတျ ုကႏါ႑ႁနဖၿ.ျနာ.တျအသအုျအငကညျေငကအျလငါံျၶ
posted by jawpakao at 11:02 AM
ူုၡ.ာညျ ူငုျဆဴစအျာညျအႁ ဳဟဉဖညျုဴၠချ ူတျ ေဳငချနအႁ ညုကႏု.မညျ ဖငစျစျါဴငစျစျ ၫ႑ႁုကႏမံျဆ. ူငုျစအျ အချလယာငုျါ႑ႁ့ကဲါံျ လႁချါ႑ႁာႁုျုဴယါံျ ဳဟဉွညျုဴၠချူတျေငကအျမၶ စၚ႔ုကႏလယအႁဳဟဉဖညျူတျအႁါံျလ.အျနုအျအက႔ ူငုျစအငကညျူတျ်မ.႔လယ႒ဘသ ာင၎ချတဓညျႊႁချ ာ႑႔စငကအျ ေအငကချူငုျာစဓ စၚ႔ုကႏူငုျ နု.ညျန္ညျနု.ညျဖဟချ ါံျ ာငုျါ႑ႁုကႏလယဘံျူငုျအႁ ဘံျအက႔ ဳဟဉစအငကညျူတျုကႏမၶ
”ဆငၠ့ျူယါၿငချတညျ ………… ူုျဆညျိႈါံျ……………… ူစံျ်ငချဘဴ.႔ၵ
ုၿငချစိၾွ.႔ ……………… ်မ.႔နဳၚ.ချႊတျ …………… ာကုျာအျနါဓတျ်ငၵ
စဓချလႁချဖကႏခဃ ……………… နခဃုျဘကလႈဳငကချ ……………… နဆ.ျနဆၿချႊငကချါဴငၵ
ိၿ.႔မႁချေ.်င ……………… ဆ႑ုျဘဟငလငုဴ. …………… ၫႁ႑ုကဲ့.ည.႔ၶ
ာင၎ချတဓညျႊႁချ ………… လႁချနု.ညျလယဆ႑တျ ……… ေႁဆတျ၏စ.အ.ၵ
ဆ႑ုျါ႑ႁဘဟငုဴ. …………… အၾ.ာမ.႔်င ………………… ိက့ျလငနမ.ာ႑႔ၵ
ူုျဆညျ႒ဘသေသ ………… ”အသန်ံ.ျစညျ္ဟငၠုျ ………… းငၠုျနစချာ႑႔အ႔ၵ
ုကဆကႏလယ႒စ႔ ……………… စၚ႔ုကႏးၠချူငကုျ …………… းငၠုျနစချနဆချ့.ၶ
€၎ႁါံျ ူငုျစအငကညျူတျ်မ.႔ ာင၎ချတဓညျႊႁချာိံျမၶ စၚ႔ုကႏေနဳအျလယ စၚ႔ုကႏေဳငချလယ ဘကဲလယအႁနစဤ.ႁ။အျ၎ဓ ဘကဲလယ ဆကချန်.႔၎ဓာူငုျ ာေနမတျလယအႁါံျ ဆ႑ုျ့ကဲ့႑ႁွကႏမၶ ူငုျတ႑ႁ ေၽ.နုၿ့ျာ.ႁနအ.ေျ ဳဟဉဳၿၠႁုဴၠချူတျာိံျမၶ
ူုၡ.၎ႁါံျ ေအငကချစဓုဴၠချ စၚ႔ုကႏ ူငုျနု.ညျန္ညျနု.ညျဖဟချမၶ ူု‘ၹ၎ျ လယ႒ဘသေဳငချအဃ႔၎ႁါံျနအံျနးႁနစဴချာႁချလင့.ၶ ာၿင့ျအႁနးႁဘုျအငကညျုဴၠချုကႏေနဳအျနအံျ ူုၡ.ါံျနူတျ ဘကဲူကႏါ႑ႁဘုျနဳအျဘကဲူကႏါံျ ဳဟဉွညျ့႑ႁိယမၶ ိယ့ကဲာ႑႔ါံျ စၚ႔ုကႏေနဳအျ၎ႁ ဖကႏအဃါံျ ဘကဲေဳငချနအႁ့႑ႁနဆချမၶ ဖကႏအဃါံျနူတျ နုဴႁုဴအျ ်ငချစၚ႔ုကႏ႒ါငစျါာဴငၠချနူတျ ါဴ.႔့႑ႁွကႏမၶ
ူစံျ်ငချါံျနူတျ ူဏလ.အျနုအျ ူာၽႁုျလငၶ (ါူ.ညျ့ရငကချ ာိံျမ)
posted by jawpakao at 5:57 PM
ေအငကချ NC ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ နဘ.ျးၠချာညျအၾင့႑ႁိကချအ႔
ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျနုဴ.ညျုဴၠချ NC ါံျ ညုကႏ နဘ.ျးၠချာညျအၾင ိကႏုကႏါ႑ႁိကချအ႔့႑ႁိံျစက့ျါံျ ၫ႕ုကႏ လယေကစျု. နဘ.ျးၠချာညျအၾင ည.႔့ႁဆ. ့ကဲါယုဴၠချမၶ
ာက့ငကအျနမ.ာၢယ ညုကႏ နဆၿ.တျ NC ၎ႁါံျ ဘကဲ=စချိႈာငကတျုနမတျ႒ဖႈ့႑ႁန်ံျါံျာ႑႔ဆ.ျၵ အက႔စဴညျ ညဘကဲ=စချနဆၿ.တျ းၠချန္အျိနမတျ န်ံျန်ံျာ႑႔့႑ႁိံျါံျာ႑႔ဆ.ျါံျမ ညုကႏနဆၿ.တျ NC ၎ႁါံျ ိကချအ႔့႑ႁာ.ညျမၶ
စၚ႔ုကႏဆၣချဆႈုဴႈ၎ႁ ေနဳဓချေမ. နု.ညျးၠချေနမချအႁ စကႏအက႔ုူငါ႑ႁူတျါံျ ညုကႏူ့ကဲန့ချမၶ ညအ႔ စၚ႔ုကႏီဖုျဳဟဉနဆၿ.တျအ႑ၠႏမယါာဴငၠချါံျ အ႑ႏၠမယလယလယဳဟဉီဖုျါံျ ေနဳဓချဳဟဉီဖုျ့႑ႁာ႑႔မၶ အက႔စဴညျ ၀ညျနဖၿ.ျအ႑ၠႏမယါံျနူတျ ၫ႕ုကႏ ဆာအးၠချ စဴညျမ ရက႔်ံျနုအျအငကုျရငကုျန၎.တျၵ ညုကႏဆာအါံျ စဴညျမစျူတျဖကုျ ၀ညျနဖၿ.ျ ါံျာၢယ ေနဳဓချေမ. နု.ညျးၠချေနမချအႁုကဲ ေနဳဓချအ႑ၠႏမယအႁုကဲါံျ စကႏအက႔ ုူငါ႑ႁေနဳဓချေမ.ါံျ နးႁိံျ့႑ႁာ.ညျမၶ
ာ႑႔စဴညျါံျ ညုကႏနဆၿ.တျိုျစအညျးၠချုဴ.ုဴ.နအႁ ေနဳဓချေမ. စကႏ=စချအက႔ ါ႑ႁူတျန၎ဓတျါံျနူတျ ့႑ႁနဆချစက့ျၵ
နးႁစကႏ=စချာ႑႔ါံျ စၚ႔ုကႏအ႑ၠႏမယ ညုကႏေနဳဓချ နု.ညျါု႕ နး.အျအျအႁ နးႁစၨ၏စေျူတျုကႏာ႑႔န့ချမၶ အချညချ၎ႁာ႑႔န့ချ မ နးႁနအၾချၫ႕ုကႏ နဆၿ.တျုဴ.ုဴ.နအႁၶ ွါယ ေနဳဓချေမ.အႁ၎ႁါံျနူတျ ၫ႕ုကႏေူကႏေဆႈစၿ.ညျစဴညျမမစျ်စျႊငချိတျူတျၶ
အက႔စဴညျ စၚ႔ုကႏအ႑ၠႏမယ ေု.႔ေမ. နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချအႁ ညုကႏူငုျစအျဖုကၵ ေနမတျ နု.ညျါု႕ဖုကအႁါံျ ညူကစျနဆၿ.တျ ့႑ႁဆဏူတျဆာဤဲ စၚ႔ုကႏနဆၿ.တျါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချမၶ
ာ႑႔စဴညျါံျ ညုကႏနဆၿ.တျ NC ူၾၠ့ျ၎ႁ ုၾငညျးၠချာ႑႔ာ႑႔ာၢယ စၿ.ညျာ႑႔န့ချိယၫႁ႑ါံျမ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချ မစျူတျူ႑့ျအႁါံျ ိယစူကဲိစျစၿ.ညျနမ.ချါံျလ.အျူတျမၶ €၎ႁါံျနူတျ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချ မစျူတျူ႑့ျည.ည.အႁ ါ႑ႁစေစျူ႑့ျၵ ါ႑ႁစူကဲိစျါံျ ိံျ့႑ႁာ.ညျုဴယုဴယါံျလ.အျူတျမၶ ညုကႏနဘ.ျစဥကါံျနူတျ စနမချအႁ၎ႁ ဘကဲူကႏာံနူတျ ိကချအ႔့႑ႁာ.ညျစက့ျၶ
စၚ႔ုကႏ NC ၎ႁ ညုကႏနု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချ ါနု.ႁနိႁဓစညျနစံ.ျ (၁၃)ါနု.ႁ အႁ နုချစဤငၠညျူတျ နုချေ.အျူတျ ေနဳဓချ စၚ႔ုကႏဆၣချ NC ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ ၎ႁၫႁ႑ာႁချမၶ ၫ႕ုကႏ KIO ါံျနူတျ စအငကညျူတျုကဲမၶ ွါယ ၫ႕ုကႏ NC ၎ႁ့႑ႁိကချုဴၠချအ႔စက့ျ အယစၳူတျမၶ ညုကႏ်ၾအျဆာဤဲန့ချ ်ၾအျဆာဤဲူတျုကႏနမ.ချၶ နဖအျအျါံျ ့႑ႁိကချအ႔ စၳအယ နႊ.ႁန့ချမၶ
စၚ႔ုကႏေ“ု.၎ႁ စနမချ်စျုကႏ ဆၣချဆႈုဴႈ၎ႁအက႔ ါ႑ႁွကႏါဘဆႈုဴႈုကႏေူကႏေဆႈါံျ့႑ႁာ႑႔မၶ ွါယ စၿ.ညျစၚ႔ုကႏုၾငညျးၠချုအကႏိံျုဴၠချာႁချိကႏုကႏေဳငချ၎ႁါံျ ာက့ငကအျနမ.ါံျ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျအႁ ။ငကအျအဲါံျအဲာႁချမၶ အဃ႔နု.ညျလယးၠချု႑.ညျအႁ ိကချ့႑ႁာ.ညျာၢယ ေနဳဓချွကႏါဘဆႈုဴႈါံျ နးႁိံျုဴၠချနမ.ချါံျ ့ကဲါယူတျမၶ
ေအငကချ BBC ဆၾ.ညျဆ႑့ျူတျ လယေကစျု. နဘ.ျးၠချာညျအၾင ည.႔့ႁဆ. းၠငုျုျနစချါံျ ေအငကချဘ႑႔ဆၾတျါူချနုအျာ.ညျမၶ
ေနမတျည.႔့ႁဆ.ိကချဆၾ.ညျဆ႑့ျူတျ စၚ႔ုကႏဋ.ညျစရငကချ BBC
posted by jawpakao at 1:18 PM
စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁ (၆/၉/၀၇) ့ငကအျၫ႕ုကႏ ါနု.ႁေူကႏအဆႈစၿ.ညျအႁ မစျႊငချူတျဆချၵ မစျ။ကချူတျဆချုကဲ စၚ႔ုကႏ နစၳႊ?ယွၫႎၫ႕ုနညႁ၎ႁ ဆချာ႑႔ဖုက ့ငကအျၫ႕ႀ႔။ကချအုျအ႔က ိယ်ကအငေ. စၚ႔ုကႏရကချါေက႔ စဳကုႉဉါံျမ ၫ႕ုကႏါနု.ႁ းၠချစဳကုႉဉ ့႑ႁန၏စ်ငကအျုကႏ လယါ႑ႁူတျေတကႏ ါံျေငကအျမၶ ၫ႕ုကႏါနု.ႁ အဴေတကႏအႁနူတျ လႁချ့႑ႁါ႑ႁနုဴ.ညျ နစၳႊ?ယွၫႎစဴညျါံျ ူကစျာ႑႔ႀ. အငအျာ႑႔ႀ.ဘုျ့ကဲာႁချ ညုကႏု႑ႈ်ုျ (၆)ာမၶ နြေ.့ကဲာႁချ ်ငကစျ စၚ႔ုကႏႀ.ာ့.တငဆကအ.မ.ာ ါံျ ဆချအႁ ုကႏူကစျအက႔ ဘ႑ငၠချႀ.အက႔ ုၾ.အျနႊ.ႁစဓချ“အချေငကအျမၶ အက႔ၫ႕ုကႏါနု.ႁဆချ ႀ.ါံျ မစျႊငချနႊ.ႁ ါနု.ႁ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ အႁအက႔ ်ႁချနႊ.ႁု႑ႈ်ုျ (၄)ာ စၚ႔ုကႏါအာကုျႀ. ေူပျနုဟ.ချယအငကုျ မၶ ူၾၠ့ျစၚ႔ုကႏ ာဃယစ႑ငၠချႀ.ါံျ ညုကႏိစျစၿ.ညျအႁ ုကဲ လယးၠချု႑.ညျူစၨဆချအႁုကဲ နါအျူတျ ဘငကနုဴ.ႁေငကအျမၶ ိကႏုကႏေဳငချ၎ႁ ေ“ု. ဆချအႁုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ ၏စဆၿ. ့႑ႁအက႔ိံျ၎ဲ္ငက့ျမၶ ၫ႕ုကႏဆချအႁါံျ မစျူတျဆချအႁါံျ လႁချါ႑ႁဘူယုကႏါံျ ေ.အျူတျနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျမၶ
ၫ႕ုကႏါနု.ႁဆချအႁ မစျႊငချူတျ လယအဴေတကႏအႁါံျ စၚ႔ုကႏေဳငချဆတျအဃ႔ (၄)ည.းႈ၏စချချါံျနုႍချဘူယနႊ.ႁမၶ ၫ႕ုကႏေူကႏေဆႈစၿ.ညျါံျနူတျ ဘူယုကႏဆချ မစျႊငချူတျ (၃)ဖုကါံျမၶ
စၚ႔ုကႏအဃ႔ေ“ု.အႁ၎ႁ ့ငကအျၫ႕ုကႏ နုႍချနုဴ.ညျာႁချာကုျူငုျ ဘၾ.အက႔ စနမချ ာကုျူငုျာညျဖုကါံျ ့႑ႁါ႑ႁစဤငၠညျမၶ စၚ႔ုကႏ းၠချစဥကနအႁ စနမချႊ?ယုဴၠချွၫႎ ၫ႕နိဆ နု.ညျါု႕အႁ ုအကႏိံျုဴၠချ ါဴငၠချအငကညျမၶ စၚ႔ုကႏ ႊ?ယွၫႎ ၫ႕ုနညေျ၎ႁ (၄/၉/၀၇)ါံျ စၚ႔ုကႏအ႑ၠႏမယမနဳချၵ းၠချအႁချုကုျ ညုကႏုၚငၠစျဆႉငၠစျ NLD ုၚငၠစျဆႉငၠစျ်ညျိုျ ထဉနဳညျူ.အျ အႁ ေ.ုၚငၠစျအက႔ ႊ?ယုဴၠချွၫႎ ၏ိ့အျာၿင့ျ ၁၀၀၀ ၏စချိံျုဴၠချမၶ အက႔စဴညျ စၚ႔ုကႏ အဃ႔ါံျစဴညျါံျ ၫ႕ုကႏ အ႑ၠႏမယ းၠချုနဳဟချၵ းၠချ့.ဳဓ ုအကႏိံျုဴၠချ နစၳႊ?ယွၫႎမၶ စၚ႔ုကႏ ႊ?ယွၫႎ၎ႁ ညုကႏုၚငၠစျဆႉငၠစျါံျ ထဉဘဓညျူ.ညျ ထုႉဋ NLD အ႑ၠႏမယးၠချနဳဟချ းငၠုျစျအက႔ ည၏ိ့အျာၿင့ျ။ငကအျ (၃၀)အဴ စဓူကစျအက႔ ဖုျနါဴ.႔ေ. ရကချာပု့.ဳဓအက႔ ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျနမ.ချါ႑ႁအဲနုအျမၶ
စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁ (၅/၉/၀၇)စဴညျ မယၺမ.တအႈၵ စၚ႔းၠချဘကႏုနူတျ ထုႉဋ NLD းၠချဘကႏုနူတျ ထဉေႁချနဳညျဘကႏ းငၠုျစျအက႔ ညုကႏ၏ိ့အျာၿင့ျ (၁၅)အဴ စၚ႔ေဳငချ ၫ႕ါပယ (၈ယ၀၀)ည.းႈါံျ ်ႊ?ယုဴၠချွၫႎစဴညျမၶ ့ငကအျၫ႕ မစျႊငချနႊ.ႁ ထုႉဋ NLD းၠချဘကႏုနူတျ ထဉေႁချနဳညျဘကႏ အက႔ လယါနု.ႁအႁိကချအ႔့႑ႁာ.ညျ နုႍချ အ႑ႁီမျ ့ငကအျိယႊ?ယွၫႎ၎ႁါံျ လယႊႁုျ့ူ.ညျ စဓူကစျုဴၠချ စၚ႔ နစၳႊ?ယွၫႎ၎ႁ ။ငကအျ (၁၀၀၀) ၏စချနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျမၶ
အက႔စဴညျ စၚ႔အဃ႔၎ႁမ ေဳငချ ။ငကအျ (၂ယ၀၀)ည.းႈါံျ စၚ႔ုကႏးၠချ စဳကုႉဉ ်ၫ႕ ဆချ ႀ.ာ့.တငစကူ.မ.ာအုႉဆငကူျ အႁ ်ႊ?ယုဴၠချွၫႎမၶ စၚ႔ုကႏါဴႁချ ာစဤႁုကႏဆချ ႀ.အၿ့ျ့ျနူတျ စႁချနအ.႔ ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျမ ဆချ ိံျုဴၠချူၾငၠ့ျ ။ငကအျ (၅၀၀) ၏စချမၶ ့ငကအျၫ႕ုကႏ နစၳႊ?ယွၫႎဆချအႁ ေဆငချနဖၿ.ျုဴၠချါံျမ ၫ႕ုကႏေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ စညျူ႑့ျအက႔ ႊ၏စယနႊ.ႁ နစၳႊ?ယွၫႎဆချအႁနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျမၶ စၚ႔ုကႏစညျူ႑့ျါံျ စညျအတျတျ့႑ႁနဆချုကဲနူတျ ညုကႏ စနမချုနာဴ.ညျ စညျူ႑့ျအက႔ ႀစႋဆချါံျ ိံျ့႑ႁနႊုျမၶ ွါယ ၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချူတျဆ.ျ၎ႁါံျ စၚ႔ုကႏ နစၳႊ?ယွၫႎ (၈၈၈၈) ိၽ.ႁစညျာါံျနူတျ စညျုဴၠချ လယးၠချု႑.ညျ စညျုဴၠချဆချအႁ ါ်ငကအျုဴၠချူတျ ဆချ လယးၠချု႑.ညျအႁါံျ ၫႁ႑ုဴၠချာႁချမၶ
posted by jawpakao at 5:28 PM
ာညျ်ငကစျးၠချာဃယအႁ မစျုဴၠချေူ.ႁ။ငကစျစတျအက႔ ႊ?ယုဴၠချွၫႎဘကဲ၎ႁမ
ာညျ်ငကစျးၠချ“ဆဆနအူဟအႁ စဓူကစျ စၚ႔ုကႏ ု႑.ျါဴႁချႊ?ယွၫႎ ်ၾအျအဃ႔ (၃၁/၈/၀၇)ါံျုကဲမၶ
ဘကဲအႁ၎ႁါံျ အႁချနုအျၫ႕ http://picasaweb.google.com/niknayman/DemonstrationInAustralia ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 11:48 AM
မႁချအၾႁုကႏ နု.ညျဆၢႁချူကစျာႁချနစၳဘအငကုျ စဴညျါအယဘဴယ။ယအက႔ ဳဟဉစဤငကညျူတျာိံျမၶ
posted by jawpakao at 9:53 AM
ဆၣချဆႈုဴႈေူကႏေဆႈစၿ.ညျ နုဴ.ညျာႁချ စအက႔နႊ.ႁမ
ၫ႕ုကႏေူကႏေဆႈစၿ.ညျ နုဴ.ညျာႁချ ဆၣချဆႈုဴႈနဖၿ.ျ NC ါံျ ၫ႕ုကႏုနညႁ၎ႁ (31-8-07)အက႔ိံျေ.မနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျမၶ ွါယစရငကချ၎ႁ ။ငကအျူကႏဳဟငၠအျစဴငၠအျါံျ ၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ ညူကစျနဆၿ.တျ ့႑ႁူနူ.ချ ုကႏ ့႑ႁနဆ.ချုႍယုကႏ လယးၠချု႑.ညျအႁ၎ဲမၶ စၚ႔ုကႏ အဃ႔်ညျ၎ႁာံ ညူကစျနဆၿ.တျ ူနူ.ချုကႏလယးၠချု႑.ညျအႁနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျမၶ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ နုဴ.ညျုဴၠချ ဆၣချဆႈုဴႈါံျ ါ႑ႁုဴၠချ စ႑ငၠချ (၁၄)ဆၿ.ႁမၶ စၚ႔ုကႏါဴယအင၎ႁ ဆဇငၠချနဆၿ.တျိုျစအညျးၠချ ါ႑ႁိံျာ႑႔ာ႑႔နုဴ.ညျုဴၠချာႁချ ဖၾ.စျစျးၠချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချမၶ ွါယူႁၫ႕းၠချစဥက၎ႁါံျ ့႑ႁါ႑ႁွကႏ၎ဲမၶ ။ငကအျမူေျာႁချဘကဲ၎ႁုကဲနူတျ ေအငကချွၫႎလယးၠချု႑.ညျအႁၵ စၾငုျနု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချအႁုကဲါံျ လငနူတျ ့႑ႁနုအျ်ာ႑႔ဆ.ျမၶ ိယ့ကဲာၢယ စၚ႔ုကႏ ါဴယအင၎ႁ နုဴ.ညျုဴၠချဆၣချဆႈုဴႈ ူေျေငကအျ့ကဲါ႑ႁမၶ
ူၾၠ့ျ စၚ႔ုကႏ ူဤဉးၠချူၢၠချ စနမချႊ?ယွၫႎိံျုဴၠချါံျာံ ညဆၣချဆႈုဴႈ၎ႁ စအက႔နႊ.ႁ ့နမုျ့နမုျ့နဘုျ့နဘုျမၶ
အက႔စဴညျ စၚ႔ုကႏဆၣချဆႈုဴႈ၎ႁ ၫ႕ုကႏနု.ညျါု႕နိႁဓူတျစညျနစံ.ျ (၁၃)ါနု.ႁအႁ ေ.အျစအငကညျူတျုကဲၵ ၫ႕ုကႏ ါနု.ႁ နိႁဓစညျနစံ.ျ ါနု.ႁ KIO ေ.အျစအငကညျူတျုကဲါံျ အချညချ ေနဳဓချေမ. နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချအႁ ာက့႑ႁဆႈုဴႈာ႑႔ဆ.ျ စအက႔နႊ.ႁ ေအငကချ၎ႁမၶ
ပတျေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ စအက႔နႊ.ႁNC ေအငကချ၎ႁာၢယ ညုကႏါနု.ႁနိႁဓူတျစညျနစံ.ျုကဲၵ ညုကႏနု.ညျါု႕အႁုကဲ စ႑ာ နစၳစအငကုျမစျူ႑့ျါံျ နုႍချိံျုဴၠချစဴညျနမ.ချ စၚ႔ုကႏုၾငညျးၠချ စၿ.ညျစၚ႔းၠချ နုႍချုအကႏိံျ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျစဴညျနမ.ချ ါံျ ၫ႕ုကႏလယေကစျု. ါနု.ႁမစျူ႑့ျ စေငကတျ ဘငကူျာံဉ”ုဲယနဳဓညျထုႉ. ့ကဲါယူတျစၚ႔ုကႏဋ.ညျစရငကချ ဘ႑ႈေငကတျနေ မၶ
လယ်ၿယအငကညျ်ငကစျုဴၠချဆၣချဆႈုဴႈအႁ ။ငကအျူကႏ ်ငကအျူကစျ်ုကႏ စနမချဆၣချဆႈုဴႈါံျ မႁချနုအျဘကဲ၎ႁနအံျ ာႁုျုဴယာႁချမ
ဘကဲ၎ႁါံျအႁချနုအျန္ဟႁ ါငကချ်႑ႁူတျ ၫ႕ာကုျူငုျနေညျအ.နညအျာ႑႔ိၿ.႔ာိံျမၶ ူၾၠ့ျိယ်ကအျနႊုျနမ.ချ ိံျအငကညျစၚ႔ုကႏ်ငကအျအက႔ ႊစျနုႍချႊႁၾုျႊ?ယူတျုကႏာိံျမၶ